မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Rikoooo
ရေး Simulator နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများ, add-ons နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်
Rikoooo အပေါ်ရရှိနိုင်ရှုခင်းကိုအလိုအလျောက်ကြေငြာကြသည်မဟုတ်, အဖြေတစ်ခုရှိသနည်း (ဦးဝင်း7/ 8 +) ဤဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ် Prepar3D နှင့် FS2004.By က default, FSX «က C ထဲမှာထည့်သွင်း: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ် Simulator ...
ဤဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ် Prepar3D နှင့် FS2004 ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, FSX တပ်ဆင်နေသည်«ကို C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို»။ အဆိုပါပြဿနာကို Windows7နှင့် 8 + သို့မဟုတ်ပင်ကို Windows 10 ပေါ်တွင်သင်တစ်ဦး configuration ဖိုင်ထဲမှာရေးသားခြင်းကနေ program တစ်ခုတားဆီးထားတဲ့« Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို»အတွင်းရှိဖိုင်များ, တစ်ဦးအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းသွားရမည့်«ကို C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ»ထို့နောက်ဖိုင်တွဲ« Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို»ပေါ်မှာညာဘက်ကလစ်နှိပ်ပြုထို့နောက်«လုံခြုံရေး» tab ကိုပေါ်, « Properties ကို»ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤတွင်, ထို့နောက်«တဲ့ Modify »ကို click «အသုံးပြုသူများ (xxxxxx) »ကိုရွေးချယ်ပါ။ ရုံဖွင့်လှစ်ပြတင်းပေါက်မှာတော့နောက်တဖန်«အသုံးပြုသူများ (xxxxxx) »ကိုရှေးခယျြ, ထို့နောက်«အပြည့်အဝထိန်းချုပ်»အပေါ်«ပြုပြင်မွမ်းမံ»ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အခုတော့သင်ရုံ« OK ကို»နဲ့ Windows တဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကို update လုပ်ပါလိမ့်မယ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်ရှိသည်။
တနင်္ဂနွေသြဂုတ်လ 09 အပေါ် by rikoooo
အဆိုပါ gauge ငါ၏အ B777 ၏လေယာဉ်မှူးအခန်းအတွက်မမြင်ရတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? (FSX/P3D) မူလက FS777 ဖန်တီးအဆိုပါ gauge Boeing300-2004.gau, အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ပါဘူး FSX ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင် DLLTo တိကျတဲ့မပါဘဲ, သင်ဖို့ရှိသည် ...
အဆိုပါ gauge Boeing777-300.gauမူလက FS2004 ဖန်တီးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ပါဘူး FSX တိကျတဲ့ DLL မပါဘဲ
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့, သင် DLL « copy paste လုပ်ရန်ရှိသည် msvcr70.dll အတွက်» FSX'' s ကိုအဓိက folder ကို (C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို) ။ သင်တို့အပေါ်မှာတူညီတဲ့ပြဿနာရှိပါက Prepar3D, ဒီဖြေရှင်းချက်လည်းအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကျနော်တို့ကအပေါ်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ် P3D.
« msvcr70.dll »ဒီနေရာမှာအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်: http://www.fichier-dll.fr/msvcr70.dll,2740,2740
ငါ့အချို့ add-ons (texture မရှိဘဲ) ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ကြသည်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? (FSX SP2 / Acceleration) သင်တစ် ဦး ပိုင်ဆိုင်သည့်အခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခု add-on ဘယ် 3D model ကို FS2004 အတွက်ဖန်တီးပေမယ့်သုံးခဲ့တယ် FSX SP2 (လညျးချေါတ ...
သင်တစ် ဦး ပိုင်ဆိုင်သည့်အခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခု add-on ဘယ် 3D model ကို FS2004 အတွက်ဖန်တီးပေမယ့်သုံးခဲ့တယ် FSX SP2 (စဆိပ်ကမ်းကျော်ခေါ်) ၏ setting တွင်ကို Preview DirectX ကို 10 ပိတ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် FSX။ တကယ်တော့ FS2004 addons DirectX 10 နှင့်မကိုက်ညီပါ။
ဥပမာအား 1: အလေယာဉ်ပျံ၏အဖြေရဲ့အစိတ်အပိုင်းမမြင်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအား 2: အဆိုပါအတောင်ပံကိုလေယာဉ်ပျံမမြင်ရတဲ့မှန်လျှင်။
ဥပမာအား 3: အဆိုပါလေယာဉ်ပျံ texture ခြင်းမရှိဘဲ, လုံးဝမီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေ : DirectX ကို 10 preview ကိုပိတ်.
ကျွန်မအမြင်ပြောင်းလဲသွားသည့်အခါကငါ့လေယာဉ်ပျံလျော့နည်းခဲ့။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? (FSX) သင့်ရဲ့လေယာဉ်အချို့သည်ချဌာနရှိရာကိုအပေါ် bounce နှင့်တူညီသောအရာဝနျးကငျြရှိမော်တော်ယာဉ်များအဘို့အဖြစ်ပျက်: တစ်လူသိများ bug ကိုဖွင့် ...
သင့်ရဲ့လေယာဉ်အချို့သည်ချဌာနရှိရာကိုအပေါ် bounce နှင့်တူညီသောအရာဝနျးကငျြရှိမော်တော်ယာဉ်များအဘို့အဖြစ်ပျက်: သော 5m အများဆုံး«ဆုံးဖြတ်ချက် mesh »ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်တစ်ဦးလူသိများ bug ကို, ပါပဲ။ ၏ Display Settings ထဲမှာ FSXအဆိုပါ«ရှုခင်း» tab ကိုနှိပ်ပြီးအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲ:
FSX အခမဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်အမတ် Sessions အတွက် Windows XP / Vista /7/ 8 / 10-64 ပြေးလာသောအခါ crashing ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပြင်ဆင်ချက်ရှိပါသလား? အဆင့် 1: UIAutomationCore.dllStep2Download: အဆိုပါကိစ္စနှစ်ခုလွယ်ကူသောခြေလှမ်းအတွက် fixed သည် ZIP ဖိုင်အထုပ်နှင့်နေရာ ...
အဆိုပါကိစ္စနှစ်ခုလွယ်ကူသောခြေလှမ်းအတွက် fixed ဖြစ်ပါတယ်:
အဆင့် 1: ဒေါင်းလုပ် UIAutomationCore.dll
2 အဆင့်: အ ZIP ဖိုင်အထုပ်နှင့်သင့်ရဲ့အမြစ်များတွင်ထုတ်ယူ UIAutomationCore.dll နေရာ FSX installation ကိုဖိုင်တွဲရှိရာဖိုင် fsx.exe န။ သေချာအောင်လုပ်ပါ FSX အပြေးမပေးပါ။
ဤ action ပြီးနောက်စတင် FSX သင်အမြင်များ switching ကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျ FSX, မရှိတော့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်စေသည် FSX crash ရန်။
ဒီပြင်ဆင်ချက်မပါဘဲ, FSX အဖြစ်ကောင်းစွာသင်တစ်ဦးပေါင်းစုံကစားသမား session တစ်ခုတွင် "အထဲကအချိန်ကုန်ဆုံး" ပါလိမ့်မည်အဖြစ်ဆွဲထားပါလိမ့်မယ်။ ဒီဗားရှင်းပျက်ကျရပ်တန့်မည်ကိုတစ်ခုတည်းသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက UIAutomationCore.dll ၏အခြားမည်သည့်ဗားရှင်းကိုမသုံးပါနဲ့။
install လုပ်နည်း FSX Windows ကို 8 / 8.1 / 10 အပေါ်? တပ်ဆင်ရန် FSX Windows ကို 8 / 8.1 အပေါ် (အားလုံးဗားရှင်း) ဤအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာ: Install 1- FSX ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ DVDs.2- နှင့်အတူအခါ ...
တပ်ဆင်ရန် FSX Windows ကို 8 / 8.1 အပေါ် (အားလုံးဗားရှင်း) ဤအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာ:
Install 1- FSX ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါဒီဗီဒီအတူ။
2- တပ်ဆင်, ကိုကျော်ပိုင်ခွင့်«ပေါ်တွင်နှိပ်ပါဖြစ်တဲ့အခါ fsx.exe » (ဤနေရာတွင်သင်ကရှာတှေ့နိုငျ C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို) ။ ဤတွင်အဆိုပါ«အသုံးပြုပုံများ» tab ကိုရွေးချယ်အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပြတင်းပေါက်ကို set up:
«၏ 3-bits ဗားရှင်းကို Download လုပ် 32- UIAutomationCore »ဖိုင်ကိုဇီပ်နှင့်ထဲမှာ paste FSX'' s ကိုအဓိက folder ကို (C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို \_) ။ ဒါဟာ၏မမျှော်လင့်ဘဲပျက်ကျ၏ပြဿနာကိုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ် FSX.
အခုတော့အဲဒီအနည်းငယ်သာခြေလှမ်းများပြီးနောက်, FSX Windows ကို 8 / 8.1 နှင့် 10 အပေါ်တည်ငြိမ်ဖြစ်သင့်
ဘာတွေလဲ FSX SP1 နှင့် SP2? SP ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများတိုးတက်အောင်ထားတဲ့ Service Pack 1 သို့မဟုတ်2များအတွက်ရပ်တည် FSX။ သူတို့ကဂိမ်းရဲ့ release.Flight Simulator ပြီးနောက်ရရှိနိုင်ပါသည် ...
SP ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများတိုးတက်အောင်ထားတဲ့ Service Pack 1 သို့မဟုတ်2များအတွက်ရပ်တည် FSX။ သူတို့ကဂိမ်းရဲ့လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
လေယာဉ်ခရီးစဉ် Simulator X ကို Service Pack 1 (ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ) ဂိမ်းရဲ့လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက် clients များတွေ့အောက်ပါကိစ္စရပ်များကိုအလျောက်:
• Activation နဲ့ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း
လေယာဉ်ခရီးစဉ် Simulator X ကို Service Pack2(ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ) အောက်ပါလုပ်ငန်းဆောင်တာတိုးတက်:
• DirectX ကို 10
သငျသညျဒုတိယတစျခုမတိုင်မီအ Service Pack 1 (SP1) install လုပ်ရန်ရှိသည်။
ငါဘယ်လိုအရာကိုသိနိုငျသညျ FSX ဗားရှင်းအကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားပါသလဲ? FSX-SP1, SP2 သို့မဟုတ် Acceleration? အရာဗားရှင်းကိုသိရန် FSX သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်, ကလွယ်ကူပါတယ်: Start ကို FSXနှင့်နေရာတိုင်းမှာသင်တစ်ဦးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင် ...
အရာဗားရှင်းကိုသိရန် FSX သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်, ကလွယ်ကူပါတယ်: Start ကို FSXသင်အလိုရှိနေရာတိုင်းမှာ, သင်ချင်တယ်ဆိုလေယာဉ်ပျံနှင့်အတူလေယာဉ်ကိုစတင်။ အခုတော့သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှာ, (ပြီးသားဖွင့်လှစ်မပေးလျှင်) မီနူးဘားတန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ညာဘက်«အကူအညီ»ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤတွင်«အကြောင်း»ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ အောက်ပါဝင်းဒိုးကိုသင့်ရဲ့ဗားရှင်းနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ် FSX:
Rikoooo ကိုလုံးဝဖယ်ရှားနည်း add-on ? အားလုံး add-onRikoooo မှ s များကိုလည်းထပ်တူပင်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Windows Vista၊ 7, 8 and 10. တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
အားလုံး add-onRikoooo မှ s များကိုလည်းထပ်တူပင်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
ဤသည်ကို Windows Vista က, 7, 8 နှင့် 10 အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
desktop ပေါ်မှာရက်နေ့တွင်«ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ Menu ကို Start », ထို့နောက်«အပေါ် All Programs ထို«ရန်»နဲ့သွား Rikoooo Add-ons »
ဖိုလ်ဒါ။ သင်ကနှိပ်သောအခါ၊ စာရင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် add-onမင်းရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးပြီ အခုတော့မင်းပဲ
သငျသညျကို uninstall လုပ်လိုက်ချင်တကိုရှေးခယျြဖို့ရှိသည်။
အထဲကနေအခြားနည်းလမ်း, ထိန်းချုပ်ရာနေရာ Windows ကိုရှေးခယျြ အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ ယခုသင် uninstall ချင်တကို select လုပ်ပါ, အားလုံးသင့်ရဲ့ installed အစီအစဉ်များ၏စာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ။
ထိုလက်စွဲ, ReadMe.txt, မူပိုင်ခွင့်စသည်တို့ကိုအဘယ်မှာရှိကြသနည်း Auto-installers ဗားရှင်း 10 သို့မဟုတ် + မှ document အားလုံး My Documents ဖိုင်တွဲသို့မဟုတ်သင်၏ Windows ပေါ်တွင်အခြေခံစာရွက်စာတမ်းများတွင်တည်ရှိသည်နေကြသည် ...
Auto-installers ဗားရှင်း 10 သို့မဟုတ် + မှအားလုံးအထောက်အထားမှာတည်ရှိပါတယ်နေကြတယ် My Documents folder ကိုသို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများ သင်၏ Windows ဗားရှင်းအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
ဗားရှင်း 10 ထက် Auto-installer ကိုအနိမ့်ကနေဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပြီး:
desktop ပေါ်မှာရက်နေ့တွင်«ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ Menu ကို Start », ထို့နောက်«အပေါ် All Programs ထို«ရန်»နဲ့သွား Rikoooo Add-ons »ဖိုင်တွဲ။ သင်ကနှိပ်သောအခါ၊ စာရင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် add-onမင်းရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးပြီ
Ohter နည်းလမ်း, သင်ပါဝင်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုသင်၏ root ဖိုင်တွဲတွင်တွေ့လိမ့်မည် add-ons ကို, ကင်းလွတ်: C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ဂိမ်းများ \_ Microsoft Flight Simulator ကို X \_ SimObjects \_ လေယာဉ်များ \_ XXXX
ငါ၏ setting ထဲမှာ«ကို Preview DirectX ကို 10 » box ကိုမတှေ့နိုငျ FSX။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? ပထမဦးစွာသင်ရှိသည်စစ်ဆေး FSXသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထား -SP2 ။ သငျသညျဆိုပါကအမှန်မှာထို«ကို Preview DirectX ကို 10 »သာပုံပေါ် ...
ပထမဦးစွာသင်ရှိသည်စစ်ဆေး FSXသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထား -SP2 ။ အမှန်မှာထို« ကို Preview DirectX ကို 10 သင် SP2 patch ကို install လုပ်ပြီးသို့မဟုတ်သင်ရှိပါကလျှင်သာ»ပေါ်လာသော FSX acceleration သို့မဟုတ် FSX ရွှေသို့မဟုတ် FSX Edition ကို Steam ။
အ SP1 Download လုပ်
အ SP2 Download လုပ်
တချို့ကအခြေခံအထွာသို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုများပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့စာရေး« gauge »ဖိုင်တွဲသို့ကြပြီလျှင်, အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ပါတယ် ...
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာကို« Gauge »ဖိုလ်ဒါတွင်အခြေခံဖိုင်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေသည်။ ကြောင်းအမှု၌, တစ် ဦး လျှင် add-on theses files တွေလိုအပ်တယ်၊ gauge တွေကို panel ထဲမှာမပြနိုင်ဘူး။ မကြာခဏဖြေရှင်းချက်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါဝင်သည် FSX။ ပြန်လည်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် FSXသငျသညျဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် gauge Recover« gauge »နှင့်«သက်ရောက်မှု»ဖိုလ်ဒါထဲကနေတိုင်းမူရင်းဖိုင် restore လိမ့်မည်ဟု Rikoooo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအနည်းငယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်သော။
Update ကို 13 / 02 / 2014: တစ်ဦးက Prepar3d ဗားရှင်းဖန်တီးလျက်ရှိသည်။
Prepar3D v2 နှင့် v3: ရှုခင်းနှင့်ကမ်းခြေကနေရေများလွန်းမှောင်မိုက်သည်, ငါကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ရေကိုမမွငျပါဘူး ဤပြဿနာကို၏ဂရပ်ဖစ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက် function ကိုဟာ့ဒ်ဝဲ Tessellation ၏ activation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် Prepar3D v2 သို့မဟုတ် ...
ဒီပြဿနာက function ကို၏ activation ကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ် hardware Tessellation ၏ဂရပ်ဖစ် configuration များအတွက် Prepar3D v2 သို့မဟုတ် v3 ။
ဤတွင်ရှုခင်းနှင့်အတူတစ်နှိုင်းယှဉ်သည် seychelles ဓာတ်ပုံရီးရဲလ်ရှုခင်း Pack ကို ဤနေရာတွင် avalaible :
ဟာ့ဒ်ဝဲ Tessellation enabled နှင့်အတူ
enabled ဟာ့ဒ်ဝဲ Tessellation မရှိရင်
အထက်ပါနှိုင်းယှဉ်ပြသထားသကဲ့သို့, function ကို disable လုပ်ဖို့ hardware Tessellation ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်း။
Deactivate ပြီးနောက်သင်ပြန်လည်စတင်ရန်ရမယ် Prepar3D ယင်းပြင်ဆင်ချက်အကျိုးသက်ရောက်မှုယူဘို့။
သောကြာနေ့နိုဝင်ဘာ 20 အပေါ် by rikoooo
ရှုခင်းအလိုအလြောကျနှင့်အတူဖွင့်မနေကြ Prepar3D v4 ။ မဖွင့်သောအခါငါ error message ကိုရ P3D အသစ်က၏အသုံးပြုသူများ Prepar3D v4: UTF-16LE မှ Scenery.cfg အတွက် charset ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်အလိုအလျောက် installers တော့ဘူးမဖွင့်လို့ရပါတယ် ...
အသစ်က၏အသုံးပြုသူများ Prepar3D v4: UTF-16LE မှ Scenery.cfg အတွက် charset ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်အလိုအလျောက် installers တော့ဘူးအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ရှုခင်းမဖွင့်နိုင်ပါ။
ယာယီဖြေရှင်းချက်: Folder ကို C ကိုဖွင့်: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_ Prepar3D အဆိုပါ Encoding လယ်ပြင်၌ကို select လုပ်ပါ UTF-4 ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်မှာတော့ ... Save As ကို (အောက်တွင်ပုံရိပ်ကြည့်ပါ) နှင့် Save ကိုကလစ်နှိပ်ပါ - v8 ထို့နောက် File ကိုကလစ်နှိပ်ပါပြီးရင် Notepad နှင့်အတူဖိုင်ကို Scenery.cfg ဖွင့်လှစ်။
ရှုခင်းနှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့ re-install လုပ်ပါ။
ဤသည်ပြင်ဆင်ချက်ကြောင့်အချင်းစီရှုခင်းတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲရမည်ဖြစ်သည် P3D တစ်ခုချင်းစီကိုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် UTF-16LE အတွက် Scenery.cfg file ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းပါ။
စက်တင်ဘာလ 6, 2017 ပြီးနောက်ဆက်ပြောသည်ရှုခင်းဤပြဿနာကြောင့်ထိခိုက်ကြသည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့ပြဿနာမကြာမီတညျ့ပါလိမ့်မည်, အသီးအသီးရှုခင်း၏အလိုအလျှောက် installer ကို update လုပ်ပေးခြင်း, ဒါပေမယ့်တချို့အချိန်ယူရသည်။
ကြာသပတေးနေ့စက်တင်ဘာလ 07 အပေါ် by rikoooo
ဘယ်အချိန်မှာငါဘာလုပ်ရမှန်းဘာမှဖြစ်ပျက်ဒေါင်းလုဒ် button ကို click? ဖြစ်နိုင်သည်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာသင်တစ်ဦးအမှားခံယူမရှိဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်စောင့်ဆိုင်းဒါပေမဲ့ဘာမျှမဖြစ်ပျက် ...
သငျသညျစောငျ့ဆိုပေမယ့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်မရှိဖိုင်ဖြစ်နိုင်သည်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သင်သည်သင်၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုအရသိရသည်မှားယွင်းမှုတစ်ခုအမျိုးအစားကို "Connection ကိုအချိန်ကုန်" သို့မဟုတ် "ERR_EMPTY_RESPONSE" ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်အခြားမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိ, ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့, Rikoooo ကနေ downloads, အထူးသဖြင့်အများအပြား Gigabytes ၏ဖိုင်တွေနဲ့အတူ downloads, တစ်ပိုကောင်းတည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်ဤ (ဟောင်း http://download.rikoooo.com:8888) ဆိပ်ကမ်းကို 8888 အပေါ်အခြားဒေသခံ server မှစလှေတျတျောနေကြသည်။
အဆိုပါပြဿနာအချို့အသုံးပြုသူကို router (ဟောင်း Livebox, Freebox, Neufbox) ၏ firewall ကသင်ဤကိစ္စတွင်၌ရှိကြ၏လျှင်သိရန်, port 8888 (နှင့်လည်းဆိပ်ကမ်း 8080) ငြင်းဆန်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်, သို့သွားရခြင်းဖြစ်သည် Simviation.com ဒေါင်းလုဒ်မစတင်ပါဘူးဆိုရင်နှင့် (Rikoooo မှာနဲ့တူ), ကျပန်းမှာမဆိုဖိုင်ကို download လုပ်ပါ, ထို့နောက်သင်သည်အဘယ်သူ၏ Router ကလုပ်ကွက်ဆိပ်ကမ်းကို 8888 (နှင့် Simviation များအတွက် 8080) အသုံးပြုသူများကသူတို့သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းအကြားရှိပါတယ်။ သူများသည်ဆိပ်ကမ်းများပုံမှန်ထို့ကြောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ရန်အန္တရာယ်ကင်းရဲ့ဝဘ် interface ကို, streaming များနှင့် HTTP အတွက်အသုံးပြုကြသည်။
သင်သည်သင်၏ router ကို (ဟောင်း Livebox) ကိုချိတ်ဆက်နှင့် 8888 ကို TCP / UDP ကို ​​port ကိုဖွင့်လှစ်မယ့်စည်းမျဉ်းကိုထည့်သွင်းရပါမည်။
လဲ tutorial များစွာနှင့်အတူ Youtube ကိုဗီဒီယို Link ကို (ကသော့ချက်စာလုံးအဖြစ်သင်၏အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေး add)
စနေနေ့မတ်လ 03 အပေါ် by rikoooo
အကြှနျုပျ၏အကောင့်ပေါ်တွင်လော့ဂ်မှဘယ်လိုနေသလဲ? ဒါဟာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများနှင့်ဂျမ်ဘိုမြန်နှုန်းခံစားရန်သင့်အကောင့်မှအပေါ် log ဖို့လုံးဝလိုအပ်ပေသည်။ စနစ်တကျဖြစ်သည်…
ဒါဟာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများနှင့်ဂျမ်ဘိုမြန်နှုန်းခံစားရန်သင့်အကောင့်မှအပေါ် log ဖို့လုံးဝလိုအပ်ပေသည်။ ဤသို့ပြုနိုင်ရန်အတွက်, သင်က်ဘ်ဆိုက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှစာမျက်နှာပေါ်တွင် main menu ကိုအောက်မှာသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာ module တစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်း Facebook ကဲ့သို့သောသင်အကြိုက်ဆုံးလူမှုမီဒီယာနှင့်အတူ login နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည် (သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာ) နဲ့ Login သင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှေးခယျြရှိသည်သောစကားဝှက်ကို။
ရဲ့ login ခင်မှာ:
အောင်မြင်တဲ့ရဲ့ login ပြီးနောက်:
စနေနေ့သြဂုတ် ၈ ရက်တွင် by rikoooo
ငါ၏အ password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာထိပ်ဖို့ connexion module ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အကောင့်ကို log ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ...
လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာထိပ်မှ connexion module ကို အသုံးပြု. သင်၏ account ကို log in ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ «အကြှနျုပျ၏အကောင့်ပြင်ရန်»ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုဆိုရင်သင်ရုံအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းလယ်၌, နှစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့စကားဝှက်အသစ်ရိုက်ထည့်ဖို့ရှိသည်။ ထို့နောက်ပြုပြင်မွမ်းမံကယ်ဖို့« Submit »အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ငါသည်ငါ့စကားဝှက်ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ငါ၏အအသုံးပြုသူအမည်မေ့လျော့ကြပြီ။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ? သင် password ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုသူအမည်မေ့လျော့ကြပြီလျှင်, သင်သည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်အသုံးပွုနိုငျ tools တွေရှိပါတယ်: ငါမေ့သွား ...
သင် password ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်အသုံးပြုသူအမည်မေ့လျော့ကြပြီလျှင်, သင်သည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကို retrieve မှသုံးနိုငျသ tools တွေကိုရှိပါသည်:
သင်ဆဲသင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်မနိုင်လျှင်ကျနော်တို့လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများလုပ်နိုင်အောင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်: ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကြှနျုပျ၏ဂျမ်ဘို subscription ကို activated သော်လည်းငါ့ download speed အမြန်နှုန်းဆဲကန့်သတ်သည် - ပထမဦးစွာအထုံးအဖွဲ့တို့ကို«ဂျမ်ဘို OK ကို» website ကိုရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ခြမ်းထဲမှာထည့်ထားကြောင်းစစ်ဆေး ...
- ပထမဦးစွာသောအထုံးအဖွဲ့တို့ကို«စစ်ဆေး ဂျမ်ဘို OK ကို »အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကဲ့သို့က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ခြမ်းထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်:
: အထုံးအဖွဲ့တို့ကို - သင်«တွေ့မြင်လျှင် အဘယ်သူမျှမဂျမ်ဘို »ကြောင်းကိုသင်၏ဂျမ်ဘို subscription ကို activated မဆိုလိုပါတယ်။ ခလုတ်ကို«ထွက် Log »ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဂျမ်ဘို subscription ကို activate သင့်သည်။
- သင်အထုံးအဖွဲ့တို့ကို«တွေ့မြင်လျှင် ဂျမ်ဘို OK ကို »ပေမယ့်သင့်ရဲ့ download speed အမြန်နှုန်းသင့်ရဲ့ bandwidth ကိုတစ်ချိန်တည်းအတွက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်အခြားအစီအစဉ်များအားဖြင့်နှေးကွေးမဟုတ်ကြောင်းစစ်ဆေးပြီးတော့, 220ko / s ကိုထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်မဟုတ်။
- သင့်ရဲ့ဂျမ်ဘို၏ activation ပြီးနောက်တိုးတက်မှုအတွက်ပြီးသားသင့်ရဲ့ downloads, ပြန်လည်စတင်ရန်သေချာအောင်ကျေးဇူးပြုပြီး, ဂျမ်ဘို URLs များကိုပြောင်းလဲပစ်ပါလိမ့်မယ်.
- သင်တို့သည်လည်းသင်၏အင်တာနက် connexion သင်မြန်နှုန်းမြင့် downloads, လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာပြဿနာကိုကွန်ပျူတာထဲကနေလာတော်မမူကြောင်းစစ်ဆေးအခြားကွန်ပျူတာနှင့်အခြားအင်တာနက်ကို connexion အတူစမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်သောနိုင်ပါတယ်။
- သင်ကအများဆုံးမှမြန်နှုန်းကို download လုပ်ပါမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်, ငါတို့သည်သင်တို့ 10 ကြိမ်ရန်သင့်ကို download speed ကိုတက်များပြားဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်သော FlashGet, download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့သင်အကြံပြုသည်။ သင်ကဒီနေရာမှာရှာတှေ့နိုငျ: http://www.flashget.com
မှန်ကန်သောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုပင် အသုံးပြု၍ မရပါကဖြေရှင်းနည်းကားအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုအမြောက်အများကိုယူဆောင်လာသည်၊ ထို့ကြောင့် login function သည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်တတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုအမြောက်အများကိုယူဆောင်လာပါသည်၊ ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင် login function သည်အလုပ်မဖြစ်တော့သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာတွင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ဘက်တွင်မထင်သေးပါ။
ဤအရာကိုဖြေရှင်းရန် Rikoooo ရှိသင်၏ session နှင့်ဆက်စပ်သော cookies များကိုရိုးရှင်းစွာဖယ်ရှားပါ။ သင်ဤ link ကိုအောက်ပါအားဖြင့်အလိုအလျောက်လုပ်နိုင်: https://www.rikoooo.com/fr/forum/user/delete_cookies သင်ကွတ်ကီးများကိုဖယ်ရှားလိုလျှင်ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်မေးမြန်းလိမ့်မည်၊ "Oui" ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ပြီးပြီ ယခုသင် login လုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည် ပြီးရင်ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ https://www.rikoooo.com/board ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ရယူရန်။
အထက်ပါဖြေရှင်းချက်အပြီးတွင်သင် login လုပ်ရန်အမှား (နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး) ကြိုးစားနေပါကသင်၏ login အချက်အလက်များကိုသင်မေ့သွားနိုင်သည်။
သင်၏အကောင့်ကိုပြန်လည် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကိရိယာများရှိသည်။
ကြာသပတေးနေ့ဇွန်လ 25 ရက်နေ့တွင် by rikoooo